ဘားဘားက Black သိုး5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း ဘားဘားက Black သိုး5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း
သငျသညျထို့နောက်ကျေးလက်လယ်ယာဘဝကိုချစ်လျှင် ဘားဘားက Black သိုး5reel အဆိုပါဖြစ်ပါသည် မိုဘိုင်း slot က ဂိမ်းကိုသင်ကစားစဉ်းစားရန်လိုခငျြ. ဤ မိုဘိုင်း slot ကဗြိတိန်နိုင်ငံကထိပ်တန်းတက် ဂိမ်းနှင့်အတူကစားသည်ကို 15 fixed နေကြတယ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှုန်းအတိုင်းအကြွေစေ့တန်ဖိုးနှင့်အကြွေစေ့အဆင့်ဆင့်ညှိနိုင်သော paylines. နောက်ခံအတွက်ရွှင်လန်းသောတိုင်းပြည်ဂီတက၎င်း၏ညှိဖို့နှိပ်သင်၏ခြေကိုစောင့်. နောက်ခံပုံရိပ်အားလုံးအပေါ်သိုးနဲ့သင်တစ်ဦးလယ်ယာဘဝတစ်ခုအတွက်မည်သို့၏ပြီးပြည့်စုံသောခံစားမှုပေးသည်တဲ့အကွာအဝေးမှာလေရဟတ်စက်နှင့်အတူမြင့်မားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လယ်ယာမြေဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျ£ 0,15 ကနေစတင်သင့်ရဲ့ကစားပွဲငွေပမာဏကိုရှေးခယျြနှင့်လှည့်ဖျားနှုန်း£ 150 တစ် max မှတညျဆောကျနိုငျသညျ.
ဘားဘားက Black သိုး၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူအကြောင်း5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း:
ဤလှပသောရှုခင်း မိုဘိုင်း slot ကဗြိတိန်နိုင်ငံကထိပ်တန်းတက် ဂိမ်း Microgaming ကတီထွင်ခဲ့သည်, သင်ကစားပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းခံစားမိစေသည်လက်တွေ့ကျကျ themes များနှင့်အတူဂိမ်းအတွက်လူကြိုက်များမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲရေး. သငျသညျသွားလာရင်းပိုက်ဆံ play နှင့်အနိုင်ရနိုင်အောင်သူတို့ကအများကြီးမိုဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်း slot နှစ်ခုဖန်တီး.
ဤ မိုဘိုင်း slot ကဗြိတိန်နိုင်ငံကထိပ်တန်းတက် ဂိမ်းအနက်ရောင်သိုးခုနစ်ယောက်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သင်္ကေတများနှင့်အတူကစားသည်ကို, အဖြူရောင်သိုး, လယ်ယာအိမ်သူအိမ်သား, BAR, ပန်းသီး, လိမ္မော်သီး, ဖရဲသီး, brinjal နှင့်ပြောင်းဖူး COB. သူတို့ထဲကငါးယောက် 2nd အတန်းကိုဖြတ်ပြီးပေါ်လာသည့်အခါသင်္ကေတများပေးဆောင်ထိပ်နှင့်အတူအနက်ရောင်သိုးများမှာ 10000 ဆလောင်းကြေး, ချေကြောင်းအဖြူရောင်သိုး 8000, 6000 လယ်ယာအိမ်သူအိမ်သားများနှင့် BAR ပေးချေမှုနှင့်အတူအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် 5000 အဆသင့်ရဲ့ရှယ်ယာ. ဒီနှစ်ခုဆုကြေးငွေသင်္ကေတများရှိပါသည် မိုဘိုင်း slot က ဂိမ်း; သူတို့ဂိမ်းလိုဂိုနှင့်သိုးမွှေးနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်အိတ်များမှာ.
ရိုင်းများနှင့်ကွဲပြားစေထူးခြားချက်များ: ဤသည်၌ရိုင်း မိုဘိုင်း slot ကဗြိတိန်နိုင်ငံကထိပ်တန်းတက် အဆိုပါကြဲဖြန့် မှလွဲ. အားလုံးနှင့်ဂိမ်းလိုဂိုကကိုယ်စားပြုသည်အစားထိုး. အလယ်တန်းပေါ်မှာဖြောင့်လိုင်းထဲမှာငါးသင်တို့ကိုလည်းပေးနိုင်ပါသည် 20000 အဆသင့်ရဲ့ရှယ်ယာ. သိုးမွှေး၏အိတ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများကြဲဖြန့်သည်နှင့်သင်ပေးသည် 10, 15 သို့မဟုတ် 20 ယင်း၏ဆင်းသက်အပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ 3, 4, သို့မဟုတ်5တစ်လှည့်ဖျားနေစဉ်အတွင်းကြိမ်. ဒီငါးသင်တို့ကိုလည်းပေးသည် 15000 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများနှင့်အတူဆရှယ်ယာ.
Black ကသိုးများပြား: အဆိုပါအင်္ဂါရပ်ဘားဘားက Black သိုးခေါ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုအဖြစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းတစ်အနက်ရောင်သိုးနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုဘားသင်္ကေတ၏အသွင်အပြင်အတွက်အင်္ဂါရပ်မြှင့်လုပ်ဆောင်နေသည်. ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်, အားလုံးကိုသင့်ကိုအနိုင်ပေးမှတက်သဖြင့်များပြားကြ၏ 999 သငျသညျညစ်ညူးသောကြွယ်ဝသောစေနိုငျသောကြိမ်.
အကျဉ်းချုပ်: ဤ မိုဘိုင်း slot ကဗြိတိန်နိုင်ငံကထိပ်တန်းတက် သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအာမခံနှင့်ကအဆထောင်ပေါင်းများစွာ၏များပြားခြင်းနှင့်ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းရစေလိုလျှင်ပြီးပြည့်စုံ. slot ကဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏လူနေမှုလုပ်သူကိုအလေးအနက်လူများအတွက်တစ်ဦးကဂိမ်း.
ဆိုက်ဘေးရီးယားမုန်တိုင်း Dual-Play စ